Business Archives - Page2of 79 - Internet Khabar
February 8, 2019 February 8, 2019 Internet Khabar
इनरुवा, २५ माघ । सरस्वती पूजा आउन केही दिन मात्र बाँकी रहेको बेला सुनसरीमा मूर्ति कलाकारलाई सरस्वती मूर्ति बनाउन भ्याइनभ्याइ भएको छ । यहाँका कलाकारलाई सरस्वती मूर्ति बनाउन भ्याइनभ्याइ भएको छ भने मूर्ति किन्नेको भीड
फिक्कल, २५ माघ । जिल्लावासीको चर्को विरोधपछि इलाम नगरपालिकाले लिँदै आएको अतिरिक्त प्रदुषण कर हटाउने भएको छ । इलाम नगरपालिकाभित्रका पम्पबाट पेट्रोलियम पदार्थमा लिइँदै आइएको अतिरिक्त कर नगरकार्यपालिकाको बैठकले हटाउने निर्णय गरेको हो । सङ्घीय
February 2, 2019 Internet Khabar
पर्वत, १९ माघ । खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले पर्वत र बागलुङका चार पानी उत्पादक कम्पनीमाथि कारवाही थालेको छ । ‘प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ कार्यान्वयन नगरेको पाइएकाले ती कम्पनीलाई पानी
आज सोमबार झन् बढ्यो सुनको मूल्य, चाँदीको पनि उच्च
January 28, 2019 January 28, 2019 Internet Khabar
काठमाडौँ । आज सोमबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ भने चाँदीको मूल्य पनि उकालो लागेको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला ६१ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
January 28, 2019 Internet Khabar
फ्रान्कफर्ट, १४ माघ । युरोपेली केन्द्रीय बैंक (इसीबी) ले ५०० दरको युरो नोट विस्थापन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । दैनिक जीवनमा कमै प्रयोग हुन थालेपछि इसीबीले उक्त बैंक नोट हटाउन लागेको हो
आज यूके पाउण्ड र कुवेती दिनारको मूल्य बढ्यो, अन्य देशको कति ?
काठमाडौँ । आज सोमबार नेपाली बजारमा यूके पाउण्डको मूल्य उकालो लागेको छ भने अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर रहेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले तोकेको विनिमयदर अनुसार नेपाली बजारमा अमेरिकी डलरको खरिददर मूल्य १ सय १३
कञ्चनपुरको एक नगरपालिकाबाट मात्रै पन्ध्र लाखको च्याउ बिक्री
January 27, 2019 Internet Khabar
कञ्चनपुर, १३ माघ । कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका क्षेत्रका च्याउ खेतीमा संलग्न किसानले रु १५ लाखभन्दा बढीको कन्ये जातको च्याउ बिक्री गरेका छन्। नगरपालिकाको कृषि विकास शाखाबाट अनुदानमा बीउ र प्रविधिमा सहयोग पाएपछि एकसय किसानले च्याउ
विदेशबाट पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ ? यस्तो छ आज राष्ट्र बैँकले तोकेको बिनिमयदर
January 27, 2019 January 27, 2019 Internet Khabar
काठमाडौँ । आज आईतबार नेपाली बजारमा अमेरिकी डलरको भाउ ओरालो लागेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले तोकेको विनिमयदर अनुसार नेपाली बजारमा अमेरिकी डलरको खरिददर मूल्य १ सय १३ रुपैयाँ ५९ पैसा छ भने विक्रिदर मूल्य
काठमाडौँ । आज आईतबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला ६१ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यसअघि सुनको मूल्य ६० हजार ६ सय
आज शनिबार कुन देशको विनिमयदर कति ?
January 26, 2019 Internet Khabar
काठमाडौँ । आज शनिबार नेपाली बजारमा अमेरिकी डलरको भाउ ओरालो लागेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले तोकेको विनिमयदर अनुसार नेपाली बजारमा अमेरिकी डलरको खरिददर मूल्य १ सय १३ रुपैयाँ ५९ पैसा छ भने विक्रिदर मूल्य